ओसोउजि : जापानको नया वर्ष अगाडिको निकै ठुलो सर सफाई | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > ओसोउजि : जापानको नया वर्ष अगाडिको निकै ठुलो सर सफाई
धेरै देशहरूमा क्रिसमस र नयाँ वर्ष पूर्वसन्धाको तयारीको लागि यो वर्षको समय हो, जापानमा चीजहरू अलिक फरक छन्। त्यहाँ क्रिसमसको सामाजिक जमघटको केही संस्करण छ भने नयाँ वर्षले आफ्ना परिवारहरूसँगै केही शान्त दिनको आनन्द लिन्छ। त्यहाँ धेरै तयारीहरू, सजावट र अनुष्ठानहरू छन्, र वास्तवमै उपयोगी ओ ओ सुजी हो (ठूलो सफाई) – बर्षको अन्त्य हुनु अघि ठूलो सफाई। यो ठूलो सफाई सामान्यतया तपाईंको कार्यस्थल र तपाईंको घरमा हुन्छ, यो एक ठूलो वसन्त सफासँग मिल्दोजुल्दो छ।
पश्चिममा वसन्तको शुरुमा प्राय: ठूलो सरसफाइको चलन छ र मानिसहरूले यसलाई साधारणतया “वसन्त सफा” पनि भन्छन्। जापानमा ओसौजीको शाब्दिक रूपमा अर्थ सफाइ (सोउजी) र ठुलो (ओ), त्यसैले ओसोउजिलाई “एक ठूलो सफाई”को रूपमा अनुवाद गर्न सकिन्छ र यो वर्षको अन्त्यसम्म गरिन्छ। धेरै जसो जापानी घरहरुमा आगोको चुल्हो थियो। घर बरु वर्षको अन्त्यसम्म फोहोर हुनेछ। एडो क्यासल डिसेम्बरमा सफा गर्न सुरु भयो, र मानिसहरूले विश्वास गर्न थाले कि डिसेम्बर सफा मात्र घर सफा गर्ने कुरा थिएन, तर यसको तयारीको लागि शुद्धिकरणको रूपमा पनि थियो। तोशिगामी-सामा, नयाँ वर्ष भगवानलाई ढोग चढाइञ्छ।
तसर्थ, जापानीहरु विश्वास गर्दछ कि ओसोउजिले तपाईको घर, पूरै परिवारको आगमनको लागि तयार छ। यो एक नयाँ आत्मा र एक नयाँ सुरुवातको प्रतीक हो। ओसोउजिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश, सुसुहाराइ(धुलो पुस्नु) भनेर चिनिन्छ। सुसुहाराई गर्दै गर्दा हामी अघिल्लो बर्षको आशिर्बादको लागि पनि धन्यवाद दिन्छौं र हामी आउँदो बर्षको ठाउँ खाली गर्न सफा गर्छौं।
ओसोउजि कहिले गर्ने
ओसोउजि धेरै जसो डिसेम्बर १३ बाट सुरु गरिन्थ्यो। तर अहिले आएर मानिसहरु धेरै ब्यस्त हुने भएर होला डिसेम्बरको अन्त्य बाट यो सरसफाई गर्न थाल्छन। कसैले त अन्तिम दिन को ३१ तारिक मा पनि ओसोउजि गर्छन यसलाई ओमिसोका भनिन्छ। धेरै जसोले भने सरसफाई क्रिसमस को दुइ दिन अगाडी गर्दछन।
झट्ट सुन्दा यो अरु सर सफाई जस्तै भएपनि निकै कठिन हुने गर्दछ। यो दिन अरु दिन कहिले सफा नगरिने समान हरु पनि सफा गरिन्छ। जस्तै भेण्टिलेसन फ्यान, झ्याल, ल्याम्प, स्टोर रुम, एर कन्डिसन आदि। तेसैले यो ठुलो सफाई निकै थाकिने काम हो। अझ सिङ्गै घरमा बस्ने मानिस हरुलाई त झन् गारो हुन्छ। यो बेला घर भरि क्लिनिङ्ग गर्ने सामान हुन्छ। हुन पनि जब हजुर सफा कोठा मा बस्नु हुन्छ हजुरको मन आफै आनन्दित भएर आउछ अनि हजुरले नया बर्ष पनि राम्रो संग स्वागत गर्न सक्नु हुनेछ
सोउजी गर्न १०० येन सपमा पाइने सामान
दाइसो र अन्य १०० येन पसल निकै सजिलो छन् किनकि त्यहा हजुरले सस्तो मात्र नभई राम्रो क्वालिटीको सामान पनि पाउनु हुनेछ। त्यस्ता केहि सामानको नाम मा हजुर हरुलाई बताउनेछु।
१. बेकिंग सोडा क्लिनर (ज्युसोउ क्लिनर)
दाइसोमा हजुरले बेकिंग सोडा क्लिनर पाउनु हुनेछ जसले तेलको दाग र चिप चिप फोहोर भएर हटाउछ। यदि हजुरले सोडियम बाइकर्बोनेट तातो पानिमा मिसाउनु भयो भने राम्रो सफाई गर्छ
२. मेलामिन स्पन्ज
धेरै मानिसहरुलाई यो १०० येन स्टोरमा पाइन्छ भन्ने थाहा छैन त्यहि भएर येही प्रोडक्ट मानिसहरुले अन्त किन्ने गर्दछन। यो स्पन्ज निकै सजिलो हुन्छ। सबै किसिमको फोहोर मैला यसले राम्रो संग दिन्छ।
३. ह्याण्डि मप
यो एक किसिमको हाते मप हो। यो पन्जा आकार को हुन्छ। यो लगाएर हजुरले धुलो जमेको ठाउहरुमा जस्तै टेलिभिजन, झ्याल हरु पुस्न सक्नुहुनेछ।
४. डिटर्जेण्ट ब्रस / सेंजाई ब्रस
यसको क्याप निकाल्नुहोस र यसमा सिधै डिटर्जेण्ट हाल्नु होस् र प्रयोग गर्नुहोस्। यो बाथ टब सफा गर्न निकै सजिलो हुन्छ। यो हजुरले क्यान डु मा किन्न सक्नु हुनेछ।
यी १०० येन सपका केहि राम्रा र उपयोगी प्रोडक्ट हुन्। हजुर आफै गएर पनि हेर्नुहोस् के के सामान पाइन्छ भन्ने।
Why do the Japanese always clean?
*Featured Image from Fotolia